laacibfm.com » Cabsidii KORONA Oo Kubadda Cagta Kasii Dhamaanaysa Iyo Mid Ka Mid Ah Horyaallada Ugu Waaweyn Yurub Oo Kulamada Soo Socda Loo Fasayo Jamaahiirta
Cabsidii KORONA Oo Kubadda Cagta Kasii Dhamaanaysa Iyo Mid Ka Mid Ah Horyaallada Ugu Waaweyn Yurub Oo Kulamada Soo Socda Loo Fasayo Jamaahiirta
Horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A ayey taageereyaashu kusoo laaban doonaan inta aanay dhamaan kulamada kooban ee hadhsan, waxaanay masuuliyiintu ka shaqaynayaan in albaabada loo furo garoomada iyadoo la raacayo tilmaamaha kala fogaanshaha ee xakamaynta caabuqa.
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Talyaaniga (FIGC), Gabriele Gravina ayaa soo bandhigay qorshe garoomada loogu fasaxayo jamaahiirta, kuwaas oo afar meelood marka loo qaybiyo baaxadda garoonka hal meel loo ogolaan doono inay taageereyaashu soo galaan, laakiin iyagana lagu kala faalalin doono garoonka.
Horyaalka Serie A oo dib loo furay bishii hore ayaa si la mid ah adduunyada kale lagu ciyaarayay garoomo madhan, laakiin kulamada kooban ee hadhsan ayaa la qorshaynayaa in dadka la dareensiiyo in noloshu caadi kusoo noqonayso oo laga gudbayo cabsidii xanuunka Korona.
Madaxweyne Gravina oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu si dhow arrintan ugala shaqaynayo guddida farsamada ee CTS, si loo hirgeliyo in taageereyaashu kusoo laabtaan garoomada.
Gravina oo waraysi siiyey Avvenire, ayaa yidhi: “Waxaanu ka shaqaynaynaa sidii ay taageereyaashu mar kale ugu soo dhowaan lahaayeen kubadda cagta. Waxaanu ku shaqaynaynaa boqollay. Laga bilaabo maanta, waxaanu ku fikiraynaa boqolkiiba 25, balse dhibaatadu waxay ka taagan tahay sidii loo maamuli lahaa.
“Waxaanu diyaar u noqonaynaa inaanu raacno nidaamka ay na siiyaan guddida farsamadu iyo in taageereyaasha la siiyo fursad ay ugu soo laabtaan garoomada.”
Inta badan kooxaha Serie A ayaa kulamadoodii saddexaad dhamaystay tan iyo markii dib loo bilaabay ciyaaraha, laakiin labada ciyaarood ee Atalanta vs Napoli iyo Udinese vs Roma ayaa usbuuca 29aad lagu soo xidhaya.
Juventus oo saddexdii ciyaarood ee ay dheeshay tan iyo markii lagu soo laabtay horyaalka ayaa hoggaanka haysa, waxaanay u dhowdahay in markii sagaalaad oo xidhiidh ah ay koobka horyaalka hanato.